काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ८ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ? Canada Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ८ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा ८ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएको हो ।
कोरोना संक्रमित हुनेहरुमा काठमाडौँका ६८५ जना, ललितपुरका १६४ जना र भक्तपुरका ४९ जना रहेका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १६ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमा ६ सय ६१ जना पुरुष र १ हजार १३ जना महिला रहेका छन् । यससँगै कोरोना संक्रमित संख्या दुई लाख १८ हजार ६३९ जना पुगेको छ ।
मंसिर ६, २०७७ शनिवार १६:५८:०२ बजे : प्रकाशित
कोरोनाको खोप बजारमा आउने वित्तिकै नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँछन् - स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) प्रमाणित भएर बजारमा आउने वित्तिकै नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् ।
विश्व प्रतिजैविक सचेतना सप्ताहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप अन्य देशका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुनेबित्तिकै नेपाल भित्राउने तयारी भएको बताए ।
उनले भने - भ्याक्सिन अन्य देशले आफ्ना नागरिकमा प्रयोग गर्ने वित्तिकै नेपाली जनताले सजिलै प्रयोग गर्न सकियोस भनेर सरकारी र गैरसरकारी तर्फबाट पहल गरिनेछ ।
कोरोनाको भ्याक्सिनको व्यवस्थापन र सहज उपलब्धताका लागि कानून संशोधन गरेर सरकार अगाडी बढेको पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बताए ।
उनले औषधि व्यवस्थापन र उपलब्धताका लागि सहज होस् भनेर कानुनी रूपमा अध्यादेशबाट औषधि आयात गर्न सजिला्े बनाइएको र भ्याक्सिन सजिलै प्रयोगमा ल्याउन कानुनी बाटो पनि खुला गरिएको बताए ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १८:२३:१५ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन २७ सय ९१ जनाले जिते कोरोना, २४ जनाले ज्यान गुमाए
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २७ सय ९१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा थप २७ सय ९१ जनाले कोरोनालाई जितेको जानकारी दिएको हो । यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या २ लाख ४ हजार ८५८ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १७ सय ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमित संख्या दुई लाख २४ हजार ७८ पुगेको छ ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १७:५६:४३ बजे : प्रकाशित
कोरोनाको कुन खोप कति प्रभावकारी ? यसरी निर्धारण गरिन्छ प्रभावकारिता
काठमाडौँ। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसले संसारभरका मानिसहरुलाई सकस बनाएको छ। गत वर्ष चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिन सुरु भएको कोरोनाभाइरस संक्रमण अहिलेसम्म विश्वभर ५ करोड ९५ लाख ६३ हजार ९ सय ६० जना संक्रमित बनाएको छ भने ज्यान जानेको संख्या १४ लाख २ हजार ९ सय ५१ पुगेको वर्ल्डोमिटरको मंगलबार अपरान्हको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसैगरी सफल उपचारपछि निको हुनेको संख्या ४ करोड १२ लाख १३ हजार ९ सय १८ रहेको छ। संक्रमितहरुको उपचार गरे पनि उनीहरुले प्रभावकारी खोप पाएका छैनन्। उनीहरुको उपचार चिकित्सा विज्ञानका थुप्रै वैकल्पिक पद्दति मार्फत गरिएको छ। यद्यपि अहिले विश्वका थुप्रै देशहरुमा भाइरसविरुद्धको सुरक्षित र प्रभावकारी खोप निर्माण गरिएको छ।
खोप विकास गर्ने क्रममा रुसले सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप स्पुतानिक फाइभ निर्माण गरेको दावी गरेको थियो। तर, अहिले खोप विकास गर्ने कम्पनीहरुको लिष्ट थपिँदै गर्दा आ–आफ्नोे खोपको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे वर्णन गर्दै उपचारमा सफलता हात लाग्ने दाबी गरिरहेका छन् । जसमा फाइजर र बायोटेकले निर्माण गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ९५ प्रतिशत, मोडर्नाको खोप ९४ दशमलव ५ प्रतिशत, रुसको स्पुतानिक फाइभ ९० प्रतिशत र अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेका ९० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको दाबी गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ खोपको निर्माण भइरहँदा अधिकांश विज्ञहरूले यी खोपहरू ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिरहेका थिए। त्यसैगरीअमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले ५० प्रतिशत प्रभावकारितामा पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि खोपको प्रयोगमा अनुमति दिने भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा के औषधि कम्पनीहरूले परीक्षणको आधारमा गरेका दाबीहरू सहि छन् ? आखिर प्रभावकारिताको आधार के हो ? यी यस्तै प्रश्नहरुले अहिले विश्वभरका आममानिसमा उत्सुकता बढाइरहेको छ।
यी खोपहरु अबका केहि हप्तामै मानिसहरुमा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि कम्पनीहरुले गरेको दाबी सही हो भने यस्तो अवस्थामा उदाहरणका लागि यदि एक सय जनालाई खोप लगाइयो भने ९० देखि ९५ जनालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण हुनबाट जोगाउने छ । यद्यपि, कम्पनीले दाबी गरेको परीक्षणको तथ्यांक अनुसार वास्तविकतामा विश्वास गर्न कठिन हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
खोप प्रयोगात्मक रुपमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्क्योलबारे धेरै मापदण्डहरुले निर्धारण गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आखिर ९० र ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भन्नुको अर्थ के हो ?
लगभग १०० वर्षभन्दा अघि विद्वानहरूले खोप परीक्षण गर्ने नियमहरू विकशित गरेका थिए। जस अन्तर्गत अध्ययनहरूले परीक्षणमा संलग्न केहि स्वयंसेवकहरुलाई वास्तविक खोप दिइने गरिन्थ्यो भने केही स्वयंसेवकहरुलाई प्लेसीबो अर्थात् कृत्रिम खोप दिइन्थ्यो। दुवै समूहलाई खोप दिइसकेपछि विज्ञहरुले कुन समूहमा कस्तो प्रभाव ग¥यो भनेर मुल्यांकन गर्थे।
यस्तै, फाइजरले ४८ हजार ६६१ जना स्वयंसेवकलाई परीक्षणमा सहभागी गराएको थियो। जसमा १७० जनामा कोरोना भाइरसको लक्षण देखापर्यो भने बाँकीलाई लक्षण देखिएन । १७० जना मध्ये ८ जनालाई मात्र वास्तविक खोप दिइएको थियो भने बाँकी १६२ जनालाई प्लेसीबो अर्थात् कृत्रिम खोप दिइएको थियो।
यस भिन्नतालाई आधार मानेर कम्पनीले आफ्नो खोप ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको हो। यद्यपि, यसमा लक्षण बिनाका संक्रमितहरुलाई समावेश गराइएको थिएन। तसर्थ, यदि एक व्यक्तिलाई खोप दिइयो, तर ऊ संक्रमित हुने सम्भावना कति हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन्।
खोप लगाएपछि पनि सतर्क रहनुपर्ने
अमेरिकाका येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेभिड पालकाअनुसार ’खोपले जीवन बचाउँदैन, खोपको अभियानले जीवन बचाउने हो। ’ उनी भन्छन्, ’खोप लगाइसकेपछि केहि समयको लागि मास्क र सामाजिक दूरी अनिवार्यता आवश्यक पर्दछ र यस नियमलाई सावधानीपूर्वक अपनाउनु पर्दछ। खोप तब प्रभावकारी हुन्छ, जब यो ठूलो मात्रामा आममानिसहरुमा पुग्छ।’
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १६:४९:२० बजे : प्रकाशित
# कुन खोप कति प्रभावकारी
जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु, चार घाइते
बैतडी । बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो दशरथचन्द नगरपालिका १० बुड्डामा मंगलबार दिउँसो जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सो नगरपालिकाकी उपमेयर मिना चन्दले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिइन् ।
मृत्यु हुनेमा स्थानीय पार्वती चन्द, भगिरथ पाण्डेय, कृष्ण लावड र पार्वती चन्द तथा सुनर्या गाउँपालिकाकी कलावती चन्द रहेका छन् । उपमेयर चन्दकाअनुसार घाइते भएका चार जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ ।
ना १ ज २१९६ नम्बरको जिप सडकबाट एक सय मिटर तल खस्दा सो हताहती भएको हो । भारतीय बजार झुलाघाटबाट पेन्सन बुझेर फर्किएकाहरु सवार सो जिपको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको सूचना आएको उपमेयर चन्दले जानकारी दिइन् ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १५:२३:३१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । दोलखाको सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई पसिना आएको छ । मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि भीमसेनको शीलामा पसिना आइरहेको हो ।
भीमसेनलाई पसिना आएको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसीले क्यानडानेपालसँग पुष्टी गरेका छन् । भीमेश्वरको शिलाको दायाँ बायाँ दुवै भागबाट पसिना आएको छ ।
भीमसेनको शीलामा पसिना आएपछि कपासले पुछेर राष्ट्र प्रमुखलाई पठाउने र राष्ट्र प्रमुखबाट क्षमा पूजाका लागि दान दक्षिणासहित पूजा सामग्री पठाउने चलन रहँदै आएको छ ।
यसअघि पछिल्लोपटक २०७६ फागुन ८ गते भीमसेनलाई पसिना आएको थियो । मुलुकमा ठूल्ठूला घटना हुँदा पनि दोलखा भीमसेनलाई पसिना आएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १५:०२:२४ बजे : प्रकाशित